कुनै समय मा एउटा अफ्रिकी किसान , उसका परिबार संग निकै खुशीँ संग बस्दथ्यो । उ आँफुलाई पुर्ण संझिन्थ्यो र त्यसैले उ खुशीँ थियो अर्थात उ खुशीँ थियो र त्यसैले उ आँफुलाई पुर्ण संझिन्थ्यो । एक दिन , एक भद्र पुरुष उसको घरमा आए र उसलाई हिरा को महिमा र सक्ति बारेमा छोटो प्रबचन दिए।उनले भन्दै थिए , " यदि तिमी संग तिम्रो बुढि औँला जत्रो हिराको टुक्रा छ भने तिमी आफ्नै सहर किन्न सक्छौ। यदि तिमी संग तिम्रो मुट्ठी जत्रो हिराको ढल्लो छ भने तिमी एउटा सिंगै देश नै किन्न सक्छौं।"। यति भनेर ति भद्र पुरुष गए । त्यो रात , त्यो किसान निकै छट्पटायो । उ सुत्नै सकेन । उ अब अपुर्ण भयो , त्यसैले उ आज खुशी छैन , अर्थात उ आज खुशीँ छैन ,त्यसै ले उ अपुर्ण छ।
भोली बिहानै उस्ले आफ्नो गर जग्गा बेच्ने र आफ्नो परिबार को रेख देख गर्ने चाझो पाझो मिलायो र हिरा खोज्न को लागी उ आफ्नो गाँउ ठाँउ बाट निस्क्यो । उ सार अफ्रिका भरि हिरा खोज्दै हिढ्न थाल्यो तर कहि पाएन , फेरी उ युरोप तिर लाग्यो र त्यहा पनि उस्ले हिरा कहि पाएन । जव उ स्पेनमा पुग्यो , उ सारिरीक, मानसिक तथा आर्थिक समस्या ले ग्रस्थ भैसकेको थियो ।
ऊ सार्है दु:खी भयो र त्यहि नजिकै रहेको बार्सिलोना नदीमा फाल हालेर आत्म हत्या गर्यो ।
उता उस्को गाँउमा , त्यो ब्यक्ति जस्ले त्यो किसान को खेत बारी किनेको थियो , उसले त्यहि खेतबारी मा पानि हाल्दै थियो । त्यहि उसको अगाडिनै एउटा टलक्क चम्केर बसेको ढुङ्गा , जस्ले ईन्द्रेणी को रंग फालिरहेको थियो , देख्यो । उसले त्यो चम्किलो ढुंङ्गा को टुक्रालाई घरमा लगेर राखेमा राम्रै सोभा दिने संझेर , उसले घर लिएर गयो र आफ्नो बैठक कोठमा राख्यो । फेरी त्यहा तिनै पहिला आएका भद्र पुरुष आएर,चम्किलो डुङ्गा लाई देखेर, त्यो नया किसान लाई सोध्छन , "के तिमीले जो संग खेत किनेका थियौं, उ फर्क्यो ?" । नया किसान ले जवाफ फर्काउछ " छैन । किन सोध्नु भयको तपाईले , उसको बारेमा? उस्ले त पहिलेनै आफ्नो घर खेत मलाई नै बेचेर गैसकेको हो " । भद्र पुरुष भन्छन् " त्यो चम्किलो बस्तु , जस्ले ईन्द्रेणीका सातै रंग फालेको छ नि, त्यो हिरा हो , जुन निकै मुल्यवान हुन्छ , मैले त त्यो देख्ने बित्तिकै चिने ।"
किसान जवाफ फर्काउछ " यो त केवल ढुंङ्गा हो, मैले मैले किनेको बारीमा पानी लगादा त्यहि कुलोमा भेटेको ढंङ्गा हो यो, त्यहा त यस्ता ढुंङ्गा हरु कति छन , कति ! मैले त केवल एउटा मात्र टिपेर ल्याएको "। त्यसपछि ति दुबैजना भयर बारिमा जान्छन र केहि थप ढुंङ्गा टिपेर परिक्षण को लागी पठाउछन र पत्ता लाग्छ ति सबै ढुंङ्गा हरु हिरा नै रहेछन । र उनिहरु त्यो बारिमा जुन पहिला को किसान ले बेचेर छोडेको थियो, हिरा नै हिरा को खानी पत्ता लगाउछन ।
सुन्ने लाई सुन को माला पढ्ने लाई हिराकै माला, अनि लेख्ने लाई फुलको माला , यो कथा सबैको दिमाख मा जाला !!
कथा त सकियो , अब यस्को समान्य शिक्षा तिर लागौं न त !
१ जब हाम्रो सोच वा दृष्टिकोण सहि छ भने , तव हामि थाह पाउने छौं कि हामि सयौ बिघा हिरा बिछ्याईएको जमिन माथि हिडिरहेका छौ। अर्थात यसलाई यसरी पनि परिभाषीत गरौं , मौका (Opportunity) सधै हाम्रै खुट्टा मुनिनै हुन्छ , हामी बाहिर गई राख्न पर्दैन, केवल हामी सहि समय मा पहिचान मात्र गरे पुग्छ ।
२ पारि पट्टि अर्काको खेता मा रहेको दुबो बारि सधै हरियो नै हुन्छ ।
३ जव हामी पारि पट्टिको अर्का को दुबो बारि हेरेर मरिरहेका हुन्छौं , त्यहा अरु मानिस हरु हुन्छन जो हाम्रो दुबो बारी हेरेर मरिरहेका हुन्छन् ।
४ ती मानिस जस्ले मौका (Opportunity)को पहिचान गर्न जानेका हुदैनन् , उनि हरु हल्ला भयो भनेर कम्प्लेन गर्छन जुन बेला मौका (opportunity) उनिहरुको ढोका ढक् ढक्याउछ ।
५ त्यहि मौका दोस्रो पटक कहिल्यै पनि दोहरिदैन , भलै थप अरु मौंका हरु , त्यो भन्दा राम्रा वा नराम्रा, आउलान् तर त्यहि चाँहि कहिल्यै पनि दोहर्याएर आउदैन् ।
(यो प्रस्तुती शिव केहरा को " यु क्यान विन" भन्ने पुस्तक बाट साभार गरिएको हो")
जीवन दर्शन मेरो कलम यताउती बाट
Labels: जीवन दर्शन मेरो कलम यताउती बाट
Anonymous 1/24/09, 4:11 PM
I think this book is really good.I am also planning to read it online. we can learn good lesson from this writing.
Anonymous 1/25/09, 7:01 PM
मेल त खाएन के रे लेख संग। पढ्न त यु क्यान विन पहिले नी पढेको हो फेरी पढीयो। अर्कै कुरा यांहा है विश्व जी।
Anonymous 1/25/09, 10:19 PM